शान्ति, स्थायित्व र विकास अबको प्राथमिकता : राष्ट्रपति भण्डारी | News Views Nepal	गृहपृष्ठ
काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालमा महिला आन्दोलनको जग आधारभूत तहदेखि नै बलियो रहेको बताउनुभएको छ ।
नेपाली महिलाबाट समान अधिकारका लागि एक शताब्दीदेखि निरन्तर रुपमा हँुदै आएको सङ्घर्ष र बलिदानीको परिणामस्वरुप अहिले राज्यका तीन महत्वपूर्ण पदमा महिलाको नेतृत्व रहन पुग्नुलाई राष्ट्रपति भण्डारी एउटा सुखद संयोगका रुपमा चित्रण गर्न रुचाउनुहुन्छ । यद्यपि, नेपाली महिलाका लागि अहिले पनि निकै ठूलो सङ्घर्ष गर्नुपर्ने स्थिति विद्यमान रहेको स्वीकार्नु हुने उहाँ नेपालको संविधानले राजनीतिक रुपमा प्रतिस्पर्धामा जाने एउटा ढोका चाहिँ खोलिदिएको तर बराबरी र हाराहारी जाने स्थिति भने अझै बनिसकेको धारणा राख्नुहुन्छ ।
नेपालको प्रथम महिला राष्ट्रपतिसँग अन्तर्राष्ट्रिय महिला श्रमिक दिवसका अवसर. पारेर नेपालको महिला आन्दोलन, महिला सशक्तीकरण, संविधान संरक्षकका हैसियतले खेल्नुभएको भूमिका, समसामयिक विषय र आगामी निर्वाचनको सेरोफेरोमा रहेर प्रधान सम्पादक राजु शाक्य र वरिष्ठ समाचारदाता नारायणप्रसाद न्यौपानेले लिनुभएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ः
एकसय वर्षअघि महिला आन्दोलनको उठान भएको बेलादेखि अहिलेसम्मका मुख्य एजेन्डा के हुन् ? र यसबीचमा के कति माग सम्बोधन भए जस्तो यहाँलाई लाग्छ ?
– सुरुवाती अवस्थामा उठाएका कुराहरु नै अहिलेसम्म निरन्तर छ भन्ने मलाई लागेको छ । जुन बेला मैले महिला आन्दोलनका बारेमा बुझ्ने कोसिस गरेँ र बुझेँ, त्यतिखेर राखेका माग र अहिले नेपालका महिलाले राखिरहेका माग उस्तै उस्तै छन् ।
समानता, शिक्षा, सम्पतिमाथिको हकका कुरा एउटा नागरिकले नागरिक सरहको अधिकार पाउनुपर्छ भनेर त्यो बेलामा राखेका मागको विश्लेषण गरेर हेर्ने हो भने आंशिक रुपमा उपलब्धि भएको छ, तर त्यसले पूर्णता नपाएको हुँदा सुरुवातमा उठाएका कुरा नै अहिलेसम्म उठिरहेको मैले पाइरहेको छु । नेपालको महिला आन्दोलनमा योगमाया न्यौपानेले गर्नुभएको योगदानलाई अतुलनीय त्याग, तपस्या र बलिदानको रुपमा लिइएको छ ।
महिला हिंसाको सवाल पनि हो । हिंसा अन्त्य गर्नुपर्छ र विभेदकारी कानुनलाई सुधार गर्नुपर्छ । त्यो प्रयास त भइरहेको छ, तर सम्पूर्ण रुपमा भइसकेको छैन । आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्ने कुरा छ, त्यो अलि जटिल विषय छ ।
हामीले त्यतिखेर उठाएको सवाल भनेको नेपाली बाबुआमाका सन्तान विभिन्न कारणले नागरिकता प्राप्त गर्नबाट वञ्चित छन् भने आमाको नामबाट नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने हो । त्यसको गलत परिभाषा कहीँ कतैबाट भएको भन्ने बुझिन्छ । अहिलेसम्म आमाको नामबाट राम्रोसँग नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था स्थापित भइसकेको छैन । त्यतिखेर उठाएका अरू एजेन्डा पनि आंशिक रुपमा मात्रै लागू भएकाले पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न अझै आन्दोलन गर्नुपर्ने स्थिति म देख्छु ।
– समावेशीको कुरा कानुनले स्थापित गरिसकेको छ । महिलाभित्र पनि समावेशी हुनुपर्छ भनेर त्यो कुरा राखिएको हो । सोच बदलिएको छ र कानुनमा त्यस्ता प्रावधान पनि राखिएका छन् । त्यति हुँदाहुँदै पनि यसलाई अलि प्रतिस्पर्धी बनाउन समावेशीले मात्र नेतृत्व विकास र क्षमता अभिवृद्धि नहुन सक्छ भन्ने कुरा उठेको छ । एउटा मान्छे सधैँभरि आरक्षणमा मात्र जाने हो कि एकपटक आरक्षणमा परिसकेपछि अर्काेलाई पालो दिएर प्रतिस्पर्धा जाने हो भन्ने कुरा उठेको छ । प्रतिस्पर्धी क्षमता वृद्धि गर्ने पद्धति बसाल्नुपर्छ । पाँच प्रतिशतको प्रावधानले उम्मेदवारसम्म भए, उम्मेदवार भएर केही सहभागिता वृद्धि भयो । परिणाम नै आउनुपर्छ भनेर ३३ प्रतिशतको प्रावधान संविधानसभामा लागू गरियो । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा महिलाको ३३ प्रतिशतको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था अहिलेको संविधानले सुरक्षित गरेको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट हुन सकेन भने समानुपातिकबाट भए पनि राजनीतिक दलले आफूले जितेकामध्ये ३३ प्रतिशत स्थान महिलालाई दिनुपर्ने संविधानको मर्म हो ।
राष्ट्रपतिज्यू, अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस (मार्च ८) को अवसरमा के सन्देश दिन चाहनु हुन्छ ?
– हाम्रो देशमा राजनीतिक सङ्क्रमणकाल अलि लम्बिँदो अवस्थामा रह्यो । हरेक कुरामा द्विविधा हुने र त्यसलाई चिर्न समय लाग्ने, संविधानसभा नै पनि दुई वर्षका लागि भनियो, दुई वर्षको संविधानसभा चार वर्ष गयो, त्यसबाट पनि नभएर फेरि चुनाव गर्नुप¥यो । त्यसपछि मात्र नयाँ जनादेशअनुसार दुई वर्षमा बल्ल संविधान जारी भयो । नेपालमा संविधान नै नभएको त होइन नि ! उठेका नयाँ मागलाई संविधानमा राख्नुपर्ने स्थिति बन्यो । त्यसका लागि पनि धेरै समय लाग्यो । नयाँ संविधानमा पनि सबैको माग नसमेटिएको हुन सक्दछ । जे उपलब्धि भयो, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दै थप उपलब्धिका लागि अघि बढ्नुपर्ने अहिलेको अवस्थामा थोरै असन्तुष्टि रह्यो र त्यसले चुनाव गराउने कुरालाई रोकी राखिएको जस्तो स्थिति बनेको छ । चुनाव भनेको लोकतन्त्रको आत्मा हो । चुनावै भएन भने कसरी लोकतन्त्र सुदृढ हुन्छ ? कसरी नागरिकले अभिमत प्रकट गर्दछन् ? स्थानीय तहको निर्वाचन नभएको झन्डै २० वर्ष हुन लागिसक्यो । नयाँ संविधानअनुसार स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन आगामी २०७४ साल माघ ७ गतेभित्र गरेर मुलुकमा शान्ति र स्थायित्व कायम गर्न आवश्यक छ । अहिले देखिएको अन्योल चिर्न जसरी आन्तरिक छलफल गरी आत्मनिर्णय लिइनुुपथ्र्यो त्यो नगरी कहिलेकाहीँ प्रचारको पछि लाग्न पुग्दा ढिलो हुन पुग्यो भन्ने लाग्छ । राजनीतिक दलले बाह्य दबाब र प्रभावमा नपरी के गर्दा नेपालको हित हुन्छ त्यो निर्णय गरेर अब अघि बढनुपर्ने हुन्छ ।
विश्वसामु नेपाललाई एक सबल र सम्पन्न राष्ट्रका रुपमा विकास गर्न यहाँको तर्फबाट के कस्तो पहल भइरहेको छ ? कृपया बताइदिनोस् ।
– नेपालीले त आफ्नो राष्ट्रलाई माया गर्ने नै भए । मेरो अनुभवमा स्वदेशमा बस्ने भन्दा विदेशमा बस्ने नेपालीलाई देशको धेरै माया र चिन्ता हुन्छ । नेपाललाई माया गर्ने, नेपाली जनताको हित चाहने, नेपाल एक सुदृढ राष्ट्रका रुपमा अघि बढोस् भन्ने कामना गर्ने थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय मित्र पनि छन् । उहाँहरुको सहयोग लिएर हामी नेपाललाई अघि बढाउन सक्दछौँ । गत वर्ष ठूलो भूकम्प गएर धेरै धनजन, सांस्कृतिक सम्पदाको क्षति भयो । त्यसबेला तत्काल राहत र उद्धारदेखि पुनःनिर्माणका कुरामा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्बाट ठूलो सहयोग रह्यो । त्यस बखत गरिएको दाता सम्मेलनमा सबैबाट सहयोग र पुनःनिर्माणमा सघाउने प्रतिबद्धता आयो ।
त्यसअनुसार हामीसँग खर्च गर्ने क्षमता र प्रणाली नहुँदा पुनःनिर्माणको कामले आशा गरेअनुरुप गति लिन सकेन । दाता सम्मेलनबाट नेपाल लगानीका लागि सुरक्षित छ भन्ने सन्देश दिनु थियो । हामीलाई प्रविधि र पुँजीको पनि आवश्यकता छ । अहिले भएको दाता सम्मेलनमा पनि १४ खर्बभन्दा बढीको लगानीको प्रतिबद्धता छ । यसबाट नेपाललाई माया गर्ने थुप्रै मित्रराष्ट्र छन् भन्ने पुष्टि गर्दछ ।
हाम्रो विदेश नीति असंलग्न परराष्ट्र नीतिको सिद्धान्तमा आधारित छ । हामी हाम्रो देशको हित हुने काम गर्दछौँ । जे गर्दा देशको हित हुन्छ हामी त्यसरी नै अघि बढ्छौँ । हामी कुनै पनि शक्तिको खेल र होडमा जाँदैनौँ । अन्तर्राष्ट्रिय जगत्को नेपालप्रतिको मित्रभावलाई शान्ति, स्थायित्व र विकासको वातावरण बनाउन उपयोग गर्न सक्नुपर्दछ । मुलुक आत्मनिर्भर हुनुप¥यो । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्नुप¥यो । सधैँभरि हाम्रा मित्र छन् भनेर चुप लगेर बस्ने, समस्या मात्रै देखाउने, हरेक साल घाटा बजेट बनाउने र अर्काको मुख मात्रै ताक्ने प्रवृत्तिको अन्त्य मात्रै होइन, समूल नष्टै हुनुपर्दछ ।
– देशको राजनीतिक माहोल सकारात्मक देखेको छु । उहाँहरु मिलेर जानुहुन्छ भन्ने नै मेरो आशा छ । यत्रो ठूलो उपलब्धि हासिल भएर नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भयो । महिला पुरुष बराबरी अधिकार पाउने स्थितिमा छन् । समावेशी छ, अल्पसङ्ख्यक र सीमान्तकृत वर्गको हकअधिकार सुनिश्चित भएको छ, जातीय छुवाछूत बन्द भएको छ । लामो समयसम्म रहेका रीतिथितिलाई व्यवस्थित गर्न समय त लाग्छ नै । सङ्घीयताको विषयमा पनि भौगोलिक रुपमा प्रदेश गठन भइसकेको छ । यो उपलब्धिलाई जनतासामु पु¥याउन प्रयास नगर्नु भनेको त कमजोरी हुन्छ । त्यो राम्रो कुरा होइन । संविधानमा व्यवस्था गरिएका राम्रा कुरा लागू गर्नुपर्छ । नेपालको इतिहासमा नभएका राम्रा कुरा सङ्घीयता, गणतन्त्र, समावेशिता, सिद्धान्तको हिसाबले सविधानको प्रस्तावनामै समाजवाद उन्मुख उल्लेख छ । कुरा मात्रै गरेर कसरी देश अधि बढ्छ ? प्राप्त उपलब्धिलाई कार्यान्वयन गर्दै जानु प¥यो नि ! मैले नेताहरुलाई भन्ने कुरा पनि त्यही हो । म आशावादी छु । नेताहरु गम्भीर हुनुहुन्छ । स्थानीय चुनाव हुन्छ, त्यसपछि अरु चुनावहरु क्रमशः हुन्छन् । माघ महिनासम्म प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भइसक्नु पर्दछ । संविधानमै अहिलेको संसदको आयु तोकिएको छ । निर्वाचन हुन नसक्दा आउने रिक्ततालाई गम्भीर ढङ्गले लिनुपर्छ भनेको छु । स्थानीय तहको चुनावको तिथिमिति घोषणा भइसकेकाले ढिलो भएपनि राम्रै गतिमा देश अघि बढेको मैले महसुस गरेको छु ।
नेपाली महिलाले दुःख पाएको कुरा त कति हो कति ! बयान गरेर साध्य छैन । यो अवस्था देख्दा हामीलाई पनि धेरै दुःख लाग्छ । नेपाल सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, सीपमूलक तालिममा खर्च गरिरहेको छ, तर साँच्चिकै सदुपयोग भएको छ कि छैन हेर्नु छ । अहिले नेपाली काम गर्न बाहिर जाने, नेपालमा काम गर्न बाहिरबाट आउने प्रवृत्ति देखिएको छ । आफ्नो घरको काम चाहिँ किन नगर्ने ? भेँडा हेर्न, लुगा धुन अन्त किन जाने ? यहीँ गरे भइहाल्छ नि ! नेपालमै यति धेरै रोजगारीको अवसर देखिन्छ कि पुनःनिर्माणकै लागि पनि धेरै श्रमिक हामीलाई चाहिन्छ ।
अहिले हामीलाई सामान्यदेखि दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता छ । इन्जिनियर, ओभरसियर, सिकर्मी, डकर्मीको आवश्यकता छ । घरमा ताल्चा लागेको छ, बारी बाँझो छ । समयको पनि दोष छ । कसरी यो परिस्थितिको उत्पन्न भयो त ? सशस्त्र द्वन्द्व र मधेसी पहाडी भन्ने द्वन्द्वको बीउ रोपिएबाट पनि वैदेशिक रोजगारमा जानेको सङ्ख्या वृद्धि भएको हो । यो देखेर मलाई पनि निकै दुःख लागेको छ ।
– राजनीतिक दलका नेता भनेको देशको जनताका नेता हुन् । नेताको जीवनशैली अत्यन्तै सरल हुनुपर्दछ । उहाँहरु जहिले पनि जनतासँगको सम्पर्कमै हुनुपर्दछ । सदाचार र आदर्श बनाइराख्नु पर्दछ । सदाचार र आदर्श भनेको ढोङ्ग होइन । रासस